ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး သိပ္ပံနည်းကျတဲ့ ရလဒ်အပေါ် အခြေခံဖြန့်ချိမည် (အမေရိကန် FDA)
၂၄ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၀
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးကို အရေးပေါ် ဒါမှမဟုတ် အပြည့်အဝ ထုတ်လုပ်သုံးစွဲခွင့် ပြု-မပြု ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သိပ္ပံရလဒ်တွေ ပေါ် အခြေခံပြီး ချမှတ်သွားမယ်လို့ အမေရိကန် အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန FDA အကြီးအကဲက ပြော ပါတယ်။
“ကာကွယ်ဆေးကို သုံးစွဲဖို့ ခွင့်ပြုချက်ပေးရာမှာပွင့်လင်းမြင်သာပြီး လွတ်လပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး FDA ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကို ကိုယ်တိုင် စိတ်ချလက်ချ မထိုးပေးနိုင်တဲ့ ဆေးမျိုးကို ခွင့်ပြုပေးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး”လို့ FDA အကြီးအကဲ Dr. Stephen Hahn က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြုလုပ်တဲ့အထက်လွှတ်တော် ကြားနာပွဲမှာ ကတိပြု ပြော ကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
FDA အကြီးအကဲ Dr. Stephen Hahn
FDA ရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနဲ့ ထိရောက်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့အညီ FDA က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကာကွယ်ဆေးတွေ သုံးစွဲသင့် မသင့်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားမှာလို့လည်းDr. Hahn က ပြောပါတယ်။
အဲဒီကြားနာပွဲမှာပဲ အမေရိကန်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဌာန ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Dr. Anthony Fauci က အခုလောလောဆယ် အလားအလာရှိတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စမ်းသပ်နေပြီး လာမယ့် နိုဝင် ဘာလ ဒါမှမဟုတ် ဒီဇင်ဘာလအရောက်မှာ ဘေးကင်းပြီးထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတခုရနိုင်၊ မရနိုင် သိရမယ်လို့ ခန့်မှန်းထား ကြောင်းပြောပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကောင်းမြင်မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ ထိရောက်တဲ့ ဆေးရမယ်လို့ ကြိမ်းသေပေါက် အာမခံလို့တော့ မရဘူး လို့ Fauci က သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ကာကွယ်ဆေးရရင်တောင်မှ နှာခေါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ဖို့နဲ့ လူချင်းခပ်ခွါခွါ နေကြ ဖို့ဆိုတဲ့ ရောဂါ ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကြံပေးချက်တွေကို ဆက်လက်လိုက်နာသွားဖို့ လိုအပ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ဆေး နဲ့ အတူ လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာသွားမယ်ဆိုရင် ဒီကပ်ရောဂါကြီးကိုကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းDr.Fauci က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံထဲ စမ်းသပ်ဆဲ ကာကွယ်ဆေးတချို့ သုံးစွဲခွင့် အတည်ပြုချက်ရတဲ့ အခါ ပြည်သူလူထုကြား အလျင်အမြန်သုံးစွဲနိုင်ဖို့ အတွက် ဆေးတချို့ကို လောလောဆယ် ထုတ်လုပ်ထားနိုင်ဖို့ အမေရိကန်တို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ကိုဗဈကာကှယျဆေး သိပ်ပံနညျးကတြဲ့ ရလဒျအပျေါ အခွခေံဖွနျ့ခြိမညျ (အမရေိကနျ FDA)
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျဆေးကို အရေးပျေါ ဒါမှမဟုတျ အပွညျ့အဝ ထုတျလုပျသုံးစှဲခှငျ့ ပွု-မပွု ဆုံးဖွတျခကျြကို သိပ်ပံရလဒျတှေ ပျေါ အခွခေံပွီး ခမြှတျသှားမယျလို့ အမရေိကနျ အစားအသောကျနဲ့ ဆေးဝါးကှပျကဲရေးဌာန FDA အကွီးအကဲက ပွော ပါတယျ။
“ကာကှယျဆေးကို သုံးစှဲဖို့ ခှငျ့ပွုခကျြပေးရာမှာပှငျ့လငျးမွငျသာပွီး လှတျလပျတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ လုပျဆောငျသှားမှာ ဖွဈပွီး FDA ဝနျထမျးမိသားစုတှကေို ကိုယျတိုငျ စိတျခလြကျခြ မထိုးပေးနိုငျတဲ့ ဆေးမြိုးကို ခှငျ့ပွုပေးသှားမှာ မဟုတျဘူး”လို့ FDA အကွီးအကဲ Dr. Stephen Hahn က ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ပွုလုပျတဲ့အထကျလှတျတျော ကွားနာပှဲမှာ ကတိပွု ပွော ကွားလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
FDA ရဲ့ ဘေးကငျးလုံခွုံရေးနဲ့ ထိရောကျမှုဆိုငျရာ စညျးမဉျြးတှနေဲ့အညီ FDA က သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ကာကှယျဆေးတှေ သုံးစှဲသငျ့ မသငျ့ကို အဆုံးအဖွတျပေးသှားမှာလို့လညျးDr. Hahn က ပွောပါတယျ။
အဲဒီကွားနာပှဲမှာပဲ အမရေိကနျကူးစကျရောဂါကာကှယျရေးဌာန ကြှမျးကငျြပညာရှငျ Dr. Anthony Fauci က အခုလောလောဆယျ အလားအလာရှိတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျဆေးတှကေို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့စမျးသပျနပွေီး လာမယျ့ နိုဝငျ ဘာလ ဒါမှမဟုတျ ဒီဇငျဘာလအရောကျမှာ ဘေးကငျးပွီးထိရောကျတဲ့ ကာကှယျဆေးတခုရနိုငျ၊ မရနိုငျ သိရမယျလို့ ခနျ့မှနျးထား ကွောငျးပွောပါတယျ။
ကာကှယျဆေးနဲ့ ပတျသကျလို့ အကောငျးမွငျမြှျောလငျ့ထားပမေဲ့ ထိရောကျတဲ့ ဆေးရမယျလို့ ကွိမျးသပေေါကျ အာမခံလို့တော့ မရဘူး လို့ Fauci က သတိပေးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ကာကှယျဆေးရရငျတောငျမှ နှာခေါငျးစညျး ဝတျဆငျဖို့နဲ့ လူခငျြးခပျခှါခှါ နကွေ ဖို့ဆိုတဲ့ ရောဂါ ကူးစကျမှုကို ကာကှယျတဲ့ ကနျြးမာရေး အကွံပေးခကျြတှကေို ဆကျလကျလိုကျနာသှားဖို့ လိုအပျကွောငျး၊ ကာကှယျဆေး နဲ့ အတူ လူထုကနျြးမာရေးဆိုငျရာ စညျးမဉျြးစညျးကမျးတှကေို လိုကျနာသှားမယျဆိုရငျ ဒီကပျရောဂါကွီးကိုကြျောလှားနိုငျမှာ ဖွဈကွောငျးDr.Fauci က ပွောပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံထဲ စမျးသပျဆဲ ကာကှယျဆေးတခြို့ သုံးစှဲခှငျ့ အတညျပွုခကျြရတဲ့ အခါ ပွညျသူလူထုကွား အလငျြအမွနျသုံးစှဲနိုငျဖို့ အတှကျ ဆေးတခြို့ကို လောလောဆယျ ထုတျလုပျထားနိုငျဖို့ အမရေိကနျတို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။
ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ နှစ်သိန်းအတွက် အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနား
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့ တင်းကြပ်တဲ့စည်းမျဉ်းများ ကန် FDA ပြင်ဆင်
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးချင်တဲ့ အမေရိကန် ထက်ဝက်နီးပါးရှိ
ပြည်သူတွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ် ကန် အစိုးရအစီအစဉ်